Okwu Mmalite na ojiji nke xd kaadị
Xd kaadị ma ọ bụ xd foto kaadị bụ a nchekwa na ngwaọrụ na kemgbe gharazie ịba uru. Ọ na-eji na ndị okenye kam na e mepụtara site Fuji na Olympus na Itie oge na ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ na kaadị na nchekwa ngwaọrụ na e mepụtara e mesịrị kpam kpam dochie xd kaadị na ọ bụ ịbụ kwuru na ọ dịghị ọhụrụ kam-eji nke a technology ọ na-e mepụtara ma ọ bụ revamped kemgbe. The nso nke xd kaadị bụ site 16MB ka 2GB nke bụ maa oke ala ka tụnyere kaadị na-mepụtara n'oge. Ugbu a na-ama formats wereworo ahịa site na a oké mmiri ozuzo na maka otu ihe ahụ ma ọ ndị mmadụ dị ka ma ha ma na-azụta obere nchekwa na-echeta na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na xd kaadị na-ugbu a dị nnọọ a oge gboo ụdị ohere nchekwa na ike na-sued n'ihi ngosipụta nzube. Otú ọ dị ya bụkwa na-ahụ kwuru na ndị ka na-eji xd kaadị weghara data ma ọ bụ na-ahụ kwuru na ọrụ ndị na-ochie kam nke Samsung, Toshiba, Fuji na Kodak ka na-eji nke a tech mpempe iji jide n'aka na nchekwa ohere na-enwe. Ọ na-na--ahụ kwuru na ndị mmadụ na-na-esiri ike weghachite data ma ọ bụrụ na xd kaadị ego n'anya emerụ. A nkuzi n'ihi ya ka e mepụtara iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na okwu nke mgbake software nke mere na onye ọrụ nwere ike inwe ndị kasị mma na ndị kasị elu nkà na ụzụ nke a nke oge a oge na ike-emejuputa atumatu iji jide n'aka na data nlaghachie abụghị otu ihe iseokwu na niile.
Irrecoverable faịlụ site xd kaadị
E nwere ọtụtụ ihe ruru ka nke a faịlụ-apụghị natara site xd kaadị. Onye ọrụ bụghị nanị chere ihu mbipụta na nke a ma dị oké ọnụ ahịa oge na-ekpochi n'ime kaadị-eme ka ọ na-akụda mmụọ ọzọ n'ihi na onye ọrụ. Na-esonụ bụ isi ihe mere mgbe ọ na-abịa irrecoverable faịlụ site xd kaadị:
1. The xd kaadị na-emerụ na faịlụ na-ekpochi n'ime.
2. The riri nke kaadị mere nrụrụ aka ha na faịlụ na-adịghị recoverable ugbu a.
3. Dị ka nkà na ụzụ ọhụrụ na kaadị ka ma e gụrụ okpomọkụ ma ọ bụ na ìhè anyanwụ na maka otu ihe nke mere na nke a.
4. xd kaadị jupụtara na foto e ji mee ka ma tinye ihe osise ma ọ bụ data e kwukwara na-ehichapụ.
5. xd kaadị e ji nyefee faịlụ na kọmputa na-n'oge ma ọ bụ ozugbo nyefe kaadị e n'otu ntabi wepụrụ si kaadị oghere na-eme ka data iji nweta rụrụ arụ Ozugbo kaadị wad eji ọzọ.
6. The xd kaadị si lifespan e dechara na a ka na-eji na-eme ka n'aka na data na kwukwara na-anọchi na na kaadị.
Weghachi xd Kaadị na nke kacha mma xd Kaadị Iweghachite Software
Wondershare Data Recovery Bụ ihe kasị mma na nke kasị kensinammuo software na e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma mgbake ọrụ enweghị ihe ọ bụla hassle na mkpokọta data na e Ewepụtara site usoro ihe omume dị na akara na ihe ndị a chọrọ nke onye ọrụ. Banyere 550+ formats na-akwado site na Wondershare Data Recovery na ọ bụ karịa ihe ọ bụla ọzọ na omume nke ugbu a ejikwara. Site mberede nhichapụ na-ezighị ezi njikwa nke xd kaadị ndị Wondershare Data Recovery na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi faịlụ natara na kacha nta na o kwere omume oge na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ ahụ mgbe niile gosiri na ọrụ elu karịa asọmpi. N'aka nke ọzọ na mmepe nke usoro ihe omume ie Wondershare jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ndụ nche upgrades n'efu na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a nwere nnọọ akwụ otu oge iji nweta usoro ihe omume na-agba ọsọ.
The metụtara usoro na-eme ka n'aka na faịlụ na-natara e kọwara dị ka n'okpuru:
1. The URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html bụ a ga-emeghe iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye usoro ihe omume jidesie usoro site na isoro kpaliri:
2. The obiọma ma ọ bụ ụdị nke faịlụ na kwesịrị mweghachi a na-ahụ na-ahọrọ na-esote na ihuenyo na-egosi mgbe ọzọ button na-enwe:
3. The ọnọdụ n'ime usoro adịkwa faịlụ a na-ahụ na-kwuru:
4. The natara faịlụ ndị ahụ na-enyocha iji jide n'aka na ndị dị mkpa na-weghachiri eweghachi na ndị nke ọzọ na-ekpe dị ka ha bụ. Onye ọrụ kwesịrị ka pịa naghachi button Ozugbo faịlụ e họrọ site na ịpị ha otu otu. Ọ na-completes usoro maka onye ọrụ na onye ha pụrụ inwe natara data:
Enweghị ike iji weghachite na faịlụ site na iji nke a usoro
Ihe omume ahụ bụ otu nke kasị mma na ọ na-eme n'aka na faịlụ furu efu na-Ewepụtara n'ime oge ọ bụla na onye ọrụ choro na-zutere na nke a. Ruru ka ọ bụla ikpe ma ọ bụrụ na onye ọrụ adịghị ike na weghachite faịlụ ahụ naanị ihe mere bụ na usoro ihe omume e arụnyere na otu mbanye si ebe data nlaghachie a chọrọ na maka otu ihe nke furu efu faịlụ e overwritten nke dị mwute ikwu na bụ a ndudue na e nweghị ụzọ iji jide n'aka na faịlụ na-Ewepụtara.
Uru na ọghọm nke xd Kaadị ojiji
-Esonụ bụ ụfọdụ n'ime uru ndị na-eji xd kaadị na ala na afọ ojuju:
1. Ọ bụ iji negate na ojiji nke flash mgbanwe oyi akwa na ya mere ọ na-akwalite ojiji nke ngọngọ ngwaọrụ Ọdịdị ahụ yiri ihe ndị na-eji na magnetik disk.
2. The xd kaadị na-e na a ụzọ jide n'aka na NAND flash ngwaike na-na-enweta ikwe ka onye ọrụ na-egwu na Boolean algebra.
3. The xd kaadị na-agụ nwere ike ju iji jide n'aka na NAND aka ike ibe na-agụ. Esonụ bụ ihe ndị cons nke na-eji xd kaadị
1. The data transfer ọsọ dị oke obere na nke ugbu a kaadị enye 90% ọzọ data transfer ọsọ ka tụnyere omenala xd kaadị
2. The kaadị maa nwere ndụ dị mkpụmkpụ ka tụnyere ndị ọzọ kaadị na Nsukka onwe ha pụtara bụ experimentally
3. The xd kaadị na-adịghị akwado ọtụtụ ebe na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ nke na kaadị a nwere ike ọ bụghị na-enweta software nkwado dị ka rivals dị ka SD kaadị na-eme.
Top 10 FREE kaadị ebe nchekwa mgbake software
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site sd kaadị ọsọ ọsọ na n'enweghị
Ndị kasị mma SIM kaadị data mgbake software
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Best xd Kaadị Iweghachite Software